६ वर्ष पहिले मृत्यु भएका जीवन राई अझैं जीवित!!!चिहान खनेर हेर्दा मरिसकेको मान्छे कसरी भेटियो जस्ताको त्यस्तै ? (हेर्नुहोस् भिडियोसहित) – News Nepali Dainik
६ वर्ष पहिले मृत्यु भएका जीवन राई अझैं जीवित!!!चिहान खनेर हेर्दा मरिसकेको मान्छे कसरी भेटियो जस्ताको त्यस्तै ? (हेर्नुहोस् भिडियोसहित)
प्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ ०८, २०७७ समय: १२:५१:३१
काठमाण्डौ । आजभन्दा ६ वर्ष पहिले मृत्यु भएका जीवन राई अझैं जीवित भएको कुरा अहिले बाहीरिएको छ । यो कुरा बाहीरिएसंगै पुरै गाउँ नै त्रसित बनेको छ । जीवन राईको मृत्युपछि उक्त गाउँमा मानिसहरुको अचानक मृत्यु हुने । बिरामी हुने क्रम बढ्दै गएको कुरा गाउँलेहरुले नोटिस गरेपछि सबैको सहमतिमा झाँक्रि बसालिएको रहेछ । उक्त झाँक्रिले जीवन राई अझैं पनि जीवित नै भएको र जीवनले नै गाउँमा सबैलाई दुःख दिएको कुरा प्रमाणीत गरिदिएपछि अहिले उक्त गाउँका सबै स्थानियहरु चिन्तामा परेका छन् ।
विज्ञानले प्रमाणीत गर्न नसकेको कुरा झाँक्रिले प्रमाणित गरिदिएपछि अहिले सबै गाउँलेहरुले धामी झाँक्रिको विश्वास गर्न थालेका छन् । उनीहरुले सबैले आफुले सक्ने कुराहरु उठाएर धामी झाँक्रिलाई दिनकोलागी एक जुट भएका छन् । धामीको कुरामा विश्वास गरेका गाउँलेहरुले धामीकै भनाईमा लागेर ६ वर्ष पहिले जीवनलाई गा’डेको ठाउँमा गएर उनको चिहान खने । जब गाउँलेहरुले धामीको भनाई अनुसार चिहान खने उनीहरुले पत्याउनै नसक्ने कुरा उक्त चिहानमा भेटे ।
एकजना स्थानियको भनाई अनुसार जब गाउँलेहरुले चिहान खने तब त्याहाँ ६ वर्ष पहिले मरिसकेका जीवनको कम्मरको भाग जस्ताको त्यस्तै भेटे । त्यो कुरा देखेर सबै गाउँलेहरु नै डराउनुका साथै अ’चम्मित पनि भए । आखिर मरिसकेका जीवनले किन अहिलेसम्म गाउँलेहरुलाई दख्ख दिईरहेका रहेछन् त भन्ने कुरा गाउँहरुले झाँक्रिको सहयोगमा जब बुझे तब उनीहरुको हो’स नै उ’ड्यो । वास्तवमा यो कारणले मृतक जीवनले पुरै गाउँलाई नै दुःख दिएका रहेछन् ।
१२ बजे राति चिहान खनेर मान्छे निकाल्ने साहशी ब्याक्ति पहिलोपटक मिडियामा आएका छन । उनले ६ बर्ष पहिले बितेका जीवन राईसङ्गै हुर्कीएका साथीसमेत रहेका दाइले जीवन राइको सोच्नै नसकिने भित्री कथा सुनाउदा सबै अचम्मित बने । उनै जीवन राईको आत्मा गाउँमा हरेक बिरामीमा पसेर बोल्न थालेपछि गाउँ नै त्रसित बनेको भन्ने खबर धेरै मिडियामा आयो ।
गाउमा धेरै युवतीहरु बिरामी पर्दै मु’र्छा पर्न थालेपछी धेरै झाक्रीले चिन्ता बसे तर कसैले पत्ता लगाउनै सकेनन उल्टै झाक्री नै ढलेपछी झनै ग’म्भीर अवस्था सिर्जना भएको र अन्त्यमा ताप्लेजुङका झाक्री कृष्ण बिकलाई बोलाएर चिन्ता बस्न सुरु गरेर चार दिन चार रात नसुती धामी बसेर ढ्याङ्रो बजाएपछी अन्त्यमा छ बर्ष पहिले मोटरसाइकल दुर्घटनामा निधन भएका जीवन राईको चिहान खनेर हेर्नुपर्ने भनेर झाक्रीले भनेपछी सुरक्षाकर्मी र गाउले बुद्धिजिबि सहित करिब दुई सय मानिसहरुले रातको १२ बजे चिहान खने । करिब २०० मानिस भएपनी चिहान खन्ने आट कसैले गरेनन । तर एकजना साहसी ब्याक्तिले चिहान खनेर नसोचेको काम गरेका छन । भिडियोसहित
Last Updated on: January 21st, 2021 at 12:51 pm
१३२१ पटक हेरिएको